जाडो याममा हामीले छालाको विशेष रुपले हेरचाह गर्नुपर्दछ । चिसोले छालामा हुने कोलाजिनलाई सोस्ने हुँदा मोस्चरको कमिले छालालाई फुस्रो र सुख्खा बनाउँछ । यसकारण निम्न उपायहरु अवलम्वन गरेर हामीले हाम्रो अनुहार एवम् शरिरको छालालाई फुर्तिलो र चम्किलो बनाउन सकिन्छ ।
–जाडो समयमा भिटामिन ‘सी’ अन्तर्गत पर्ने खाना, फलफुल र तरकारीहरु प्रशस्त मात्रामा खानुपर्दछ ।
–प्रोटिनले छालालाई कोलाजिन प्रदान गर्ने भएकोले प्रोटिनयुक्त पोषण तत्व मात्रा मिलाएर खानुपर्दछ ।
–मोस्चराइजार क्रिम ६ घण्टाको फरकमा लगाउनुपर्छ ।
–जाडो समयमा पानीमा कागती राखेर खाने गर्नाले छालामा मोस्चर पाउनुको साथै छाला चम्किलो देखिन्छ ।
–बढि भन्दा बढि फलफुल एवम् तरकारी खाने गरेमा शरिरलाई चाहिने जति पानीको मात्रा पुग्दछ ।
–जाडो महिनामा लगाउने मोस्चराइजर गर्मी महिनामा लगाइने भन्दा फरक हुनुपर्दछ ।
–हाम्रो छालालाई चम्किलो र मुलायम बनाउन भिटामिन ‘सी’ भएको खाद्य पदार्थहरुको आवश्यकता पर्दछ । तर यि पदार्थ पानीमा घोलिएर, हावामा उडेर, तातोबाट नष्ट हुने भएकोले यिनीहरुको सेवन गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।
–जाडोयाममा हप्ताको एउटा केरा र एभोकाडोमा २–३ थोपा नरिवलको तेल राखेर प्याक लगाएमा छाला चिल्लो र चम्किलो देखिन्छ ।
–जाडो समयमा छालाको बाहिरी तह पनि शुष्क भएर चाउरी आउने, फुस्रो देखिने समस्या भएकोले महिनामा एकपटक सौन्दर्य विशेषज्ञको सल्लाह अनुसार फेसियल गराउनु आवश्यक हुन्छ ।
–जाडो मौसममा स्किन हाइट्रटिङ गरिरहनु पर्ने हुँदा गुलावजल र टोनर धेरै भन्दा धेरै लगाउने ।
–जाडो याममा सबै प्रकारको छालामा कोलोजिनको मात्रा घट्ने र छालामा डिहाइड्रेट हुने भएकोले रातको समयमा मोस्चराइजर क्रिम लगाएर सुत्नु निकै नै लाभदायक हुन्छ । किनभने रातको समयमा छिट्टै नै स्किन रिपियर हुन्छ ।
[caption id="attachment_40043" align="alignnone" width="200"] सीता अर्याल, सौन्दर्यविद् (मोनालिसा पार्लर)[/caption]
१६ मंसिर २०७५, आईतवार ११:४०
सीता अर्याल, सौन्दर्यविद् (मोनालिसा पार्लर)
cold, skin, छाला, जाडो
Prevश्रृंखला ‘हेड टु हेड च्यालेञ्ज’ मा पराजित, मागिन नेपालसँग माफी
कामना फिल्म अवार्डमा को कसरी आए ?(भडियोसहित)Next
वर्षातको मौसममा छालाको हेरचाह कसरी ?
काठमाडौँमा यस वर्षकै सबैभन्दा बढी जाडो
रेड वाईन ब्यूटि प्रडक्ट पनि हो
बर्षाको मज्जा त लिनुस् तर फ्लुवाट भने बच्नुस्